किन कसैलाई बसमा यात्रा गर्दा बान्ता हुन्छ ? यात्रा गर्नुअघि अपनाउनुस् यी उपाय - ramechhapkhabar.com
किन कसैलाई बसमा यात्रा गर्दा बान्ता हुन्छ ? यात्रा गर्नुअघि अपनाउनुस् यी उपाय
सार्वजनिक यातायात अथवा गाडी चढ्दा कतिपयलाई बान्ता हुने समस्या हुन्छ । प्रायजसो लामो दुरीको यात्रा गर्दा बान्ता हुने गर्दछ । कसैलाई यात्रामा निस्कन साथ बान्ता हुन्छ भने कसैमा लामो यात्रा गर्दा यो समस्या देखा पर्दछ ।
यात्रा गर्ने क्रममा बान्ता हुनु एक कष्टकर क्षण हो । यसले शरीर कमजोर बनाउने मात्र होइन यात्रा नै नरमाइलो हुन्छ । बान्ता हुनुअघि मुखमा पानी आउने, वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, छटपटि हुने, पेट बाउँडिने लगायतका लक्षणहरु देखिन्छन् ।
बान्ता हुनबाट कसरी बच्ने ?
– मास्कको प्रयोग गर्ने । – यात्रामा अनिवार्य खाना खाने । – टाढाको दृश्य हेर्ने । – चिल्लो कम भएको खानेकुरा खाने । – दुग्धजन्य पदार्थ, गुलियो, कोक नखाने ।
यात्रा गर्ने क्रममा ल्वाङ मुखमा राखेर चुस्नाले वाकवाकी र बान्ता हुँदैन । यस्तै यात्रा गर्नुअघि अदुवा मिसाएको चिया खाएर यात्रा गरे बान्ता हुदैँन । साथै यात्रामा अदुवाको टुक्रका मुखमा राखेर चपाउँदा पनि बान्त हुदैँन ।
धनियाँको केहि दाना मुखमा राखेर चपाउनाले पनि वाकवाकी लाग्दैन । जामुनको पात वा फलमा बान्ता रोक्ने औषधीय गुण हुन्छ त्यसैले जामुनको रस निकालेर पिउँदा पनि बसमा यात्रा गर्दा बान्ता हुँदैन ।